အမြင့်ကြိမ်နှုန်း PCB ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China High Frequency PCB ထုတ်လုပ်သူများ
ကြှနျုပျတို့၏ website မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
Multilayer PCB များ
အမြင့် Tg PCB
Hard ရွှေ PCB
LED display ကို PCB
RF & မိုက်ခရိုဝေ့ PCB
သတ္တု core ကို PCB
FPC- ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB
HDI pcb3+ N +3Laser သည်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Castellat မှ ...
သတ္တုအမာခံ PCB embedded ကြေးနီအကြွေစေ့ pcb Thermal Mana ...
တင်းတင်းသော flex pcb ဒီဇိုင်း HDI သည်တိမ်းစောင်းသွားပြီး ...
Rigid flex pcb အလွှာ FPC မျက်စိကန်း။ Q မှတဆင့်မြှုပ်ထားသော ...
ကြမ်းတမ်းသော flex pcb အလွှာပြောင်းလွယ်သော pcb HDI မည်သည့်အလွှာမဆို ...
PTFE နှင့် FR4 Hybri ထုတ်လုပ်သောကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB များ ...
HDI pcb မည်သည့်အလွှာ hdi pcb မြန်နှုန်းမြင့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု ...
LED မျက်နှာပြင် pcb HDI လေဆာရောင်ခြည် PAD ကြေးနီဖြင့် ...
အလွှာ pcb Sideplating ရွေးချယ်ထားသောခဲယဉ်းသောရွှေ ...
တရုတ်ပြည်အတွက် Professional ကစက်ရုံ LED အလင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Pr ...
Flex တင်းကျပ်သောဘုတ်အဖွဲ့ Semi Flex PCB Black Soldermask | YMSPCB
Thermal Clad သတ္တုအဓိက PCB Thermoelectric Copper ba ...
လူမီနီယမ် core ကို PCB လူမီနီယံ core ကို pcb 2L လူမီနီယံ pcb | ...
တစ် ဦး တည်းတဖက်သတ် Flex PCB 1Layer Raised Point ကို | YMSPCB
4Layer Flex PCB နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ FPC | YMS PPCB
နှစ်ဖက်သုံးသတ္တုကိုယ်ထည် pcb Copper Base High Power M ...
LED လူမီနီယမ် pcb လူတစ် ဦး တစ်ဖက်သတ်လူမီနီယံ LED ဆားကစ် B ...
High Frequency PCB ဆိုသည်မှာမိုဘိုင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့၊ ရေဒီယိုလှိုင်းများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဒီဇိုင်းအပလီကေးရှင်းများအပါအ ၀ င်အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင်အချက်ပြခြင်းအတွက်အသုံးပြုသော PCB အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်ဘုတ်ပြားများပါ ၀ င်သောမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်သောသစ်သားပြားများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့သည် signal ၏ sensitivity ကိုကြည့်။ application ၏အပူအပူလွှဲပြောင်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB မှပေးသောကြိမ်နှုန်းမြင့်ကိုရရှိရန်အထူးပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဘုတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်အချက်ပြမှု၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အလားတူပင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများ၏ Er တန်ဖိုးမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုသည်မဆိုဘုတ်၏ impedance ကိုများစွာသက်ရောက်နိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်စျေးနှုန်းချိုသာသော DK နှင့် DF တန်ဖိုးများရှိခြင်း၊ signal နိမ့်ကျမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်သင့်တော်ပုံရသောကြောင့် rogers dielectric material ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
Teflon သည် 5GHz ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB ၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသောအခြားဘုံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ DK, DF နှင့်ရေစုပ်ယူမှုအချက်အလက်များအရ၊ Teflon သည် FR4 ထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းစျေးကြီးသည်။
အကယ်၍ သင်၏ပရောဂျက်များသည် 10GHz ထက်ပိုသောအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးတည်ငြိမ်သောအချက်ပြမှုလိုအပ်ပါက Teflon သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့်အချက်ပြများသည်ဆူညံသံကိုထိခိုက်လွယ်ပြီးသမားရိုးကျဆားကစ်ပြားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုတင်းကျပ်သော impedance သည်းခံမှုနှင့်အတူလာသည်။
ဖုန်းနံပါတ် MB: 0086-15986993949 ဖုန်းနံပါတ်: 0086- (0) 752-2050781 ဖက်စ်: 0086- (0) 752-2050783
နေရပ်လိပ်စာ Huizhou စက်ရုံ၊ ECheng စက်မှုဥယျာဉ်၊ Xinke ရိပ်သာလမ်း၊ Tongqiao မြို့၊ Zhongkai အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊ Huizhou City Guangdong Province China
E-mail ကို Joyce@ymspcb.com
©မူပိုင်ခွင့် - 2019-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ လမ်းညွှန် ,Hot ထုတ်ကုန်များ ,မြေပုံအညွှန်း ,amp မိုဘိုင်း
၂ အလွှာရှင်းလင်းသောဘုတ် , Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ , သောပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ် , Mutilayer Pcb , လျင်မြန်စွာပြန်လာ Pcb , Mutilayer Fpc ,